HATRAIZA NY FAHARETANA? – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 février 26, 2016 Laisser un commentaire sur HATRAIZA NY FAHARETANA?
« Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao: tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanani-vavy tamin’izay ora izay » Matio 15:28
Sedra maro no nihatra tamin’ity ramatoa ity ny amin’ny ahazoan’ny zanany vavy ny fanasitranana. « Mamindrà fo amiko, Tompoko, zanak’i Davida ô! Ny zanako vavy ampahorian’ny demonia loatra!
– Tsy namaly teny azy Jesosy: Sedra iray nanjo ity vehivavy ity izao tsy namalian’ny Tompo azy izao. Toa ny fandroahana ihany ny tsy famaliana ny fitalahoana. Fa Izy tsy namaly teny azy! Tsy firaharahiana ve izao? Manao ahoana isika rehefa mivavaka ka tsy mamaly Jesosy?
– Dia nangataka ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: roahy izy, fa miantso mafy ato aoriantsika! Toa fanaovana tsinontsinona ity vehivavy ity izao ataon’ny mpianatra izao!
– Mbola mafy noho izany koa aza ny teny navalin’i Jesosy azy: Tsy nirahina Aho afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely, mety ho azo heverina ho fanilihana ity vehivay ity tsotra izao izany valin-teny izany. Tsy nirahina afa-tsy amin’ny ondry verin’Isiraely ihany Jesosy! Nefa mbola tsy nihemotra ihany ity vehivavy ity fa vao maika aza nanatona, ary niankohoka teo anatrehan’i Jesosy ka mbola niteny hoe: Tompoko ô, vonjeo aho.
– Tena naharary ny valin-teny nataon’i Jesosy azy! « Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely »; Oharina amin’ny amboakely ity vehivavy ity! asa isika ra oharina amin’ny alika ka hahatanty? Fa ity vehivavy ity dia niharitra ihany! Tsy nandà izy: marina izany, tompoko! nanaiky izy! Nefa tsy nanaiky fotsiny izy fa mbola niaro ny zon’ny alika ihany aza! « Ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombony latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany. » Izany hoe nanaiky handray ny toeran’ny amboakely izy.
Ny valiny lehibe dia azony: Ravehivavy, lehibe ny finoanao! Tongava aminao araka izay irinao! Mba maharitra tahaka ity vehivavy ity ve ianao? Raha tsy naharitra ianao dia andeha hifona amin’ny Tompo Jesosy! Mifona aho Jesosy fa tsy nanana faharetana tamin’ny fangatahako!
Publié parfilazantsaramada février 26, 2016 Publié dansUncategorized